Hlola i-Tenerife, i-Canary Islands - World Tourism Portal
Hlola i-Tenerife, iziqhingi zaseCanary
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eT Tenerife, eCanary Islands
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTenerife
Bukela ividiyo ngeTenerife
Hlola i-Tenerife enkulu kunazo zonke eCanary Islands futhi yindawo enhle yokuhamba. Abavakashi baseBrithani nabaseJalimane beza ngamashumi ezinkulungwane zabo minyaka yonke ukuvakashela amabhishi ayo amangalisayo nokuphila ebusuku okuhle. Kuyathandwa kakhulu futhi phakathi kwabenzi bamaholide abavela enhlonhlo yaseSpain, ikakhulukazi ngesikhathi sePhasika. I-Tenerife mhlawumbe ingesinye seziqhingi zokugcina zepharadesi zaseYurophu. Inikeza amahlathi aluhlaza, izilwanyana ezingajwayelekile kanye nezimbali, ugwadule, izintaba, izintaba-mlilo, imigwaqo enhle kakhulu emabhishi namabhishi amahle.
I-Las Galletas idolobhana elinokuthula.
Los Abrigos. Idolobhana elihle lokudoba elisebenza ogwini oluseningizimu yeSiqhingi.
ICosta Adeje Adeje idolobhana elidala elisegqumeni elingaphezulu kogu. Manje indawo yokuvakasha enkulu.
Las Américas idolobha elikhulu lezivakashi.
ILos Cristianos Yake yaba idolobhana labadobi kodwa manje isiyindawo enkulu yokuvakasha.
IPuerto de la Cruz ehambisana neLoro Parque Zoo.
ILos Gigantes izivakashi kanye nabendawo. AmaLiff Gigantes Cliffs ahlaba umxhwele atholakala lapha. Kukhona futhi uhambo oluningi lomkhomo nehlengethwa kusuka lapha.
La Laguna idolobha lamagugu omhlaba.
ILa Orotava Idolobha elihle enyakatho yesiqhingi.
El Medáno. Ibuyiselwe emuva, enye indawo eyisiphephelo, enye yezinhloko zomhlaba ezinamandla omoya. Ngokuvamile kunomoya kakhulu lapha.
Santa Cruz de Tenerife inhloko-dolobha yesiqhingi nomnyango weSanta Cruz de Tenerife.
Los Silos. Idolobhana elincane, lendabuko laseCanada phakathi kwentaba enhle nolwandle.
Isifunda esimpofu, esikhula ngamabhanana emashumini eminyaka adlule, iT Tenerife iye yathuthukiswa emazingeni okuphila aseYurophu selokhu kwafika ukuhamba komoya omningi kuma-1960s, okuletha imboni nezigidi zezivakashi unyaka ngamunye. Emashumini eminyaka lokhu kuholele ekutheni kwakhiwe izakhiwo eziningi nezindlu eziningi, okwenza izingxenye zesiqhingi zibe ngamadolobha amakhulu. Ngenkathi iyingxenye ye-EU ngezinhloso zezepolitiki, lesi siqhingi sihlala singaphandle kwamasiko aso nendawo yendawo ye-VAT, senza izimpahla zentela eziphezulu ezifana nogwayi notshwala zingabizi kakhulu kwenye indawo eYurophu.
Abavakashi abaningi abancane bahlanganyela eningizimu yalesi siqhingi nabavakashi abadala nabadala emndenini bekhetha iPuerto de La Cruz nezindawo ezikuyo. Ngasohlangothini oluseningizimu kunohlobo olungaguquguquki, kuncane okungekho moya, futhi isimo sezulu esihle kakhulu sebhishi isikhathi esiningi sonyaka yize kuye kwaba nezimo ezivame kakhulu zokuphola nesimo sezulu esibandayo esikhathini sikaJan-Feb. Futhi lindela ezinye izinsuku ezimanzi kakhulu zaleso sikhathi sonyaka yize izinsuku eziningi zisazoba yilanga. Kunamahhotela amaningi, imisebenzi kanye nokudla neziphuzo zaseBrithani.
Ngasohlangothini olusenyakatho lwesiqhingi uzothola amasiko endawo ahlala eluhlaza futhi esebenzayo. Kukhona imizwa yaseSpain yonyaka wonke yasentwasahlobo. Isimo sezulu siyashintshashintsha kancane lapha, kodwa futhi simnandi kakhulu yize singashisi njengaseningizimu.
Phakathi enyakatho naseningizimu yesiqhingi kuhlala SpainIntaba ende kunazo zonke, intaba-mlilo eyi-El Teide (3718m engenhla kolwandle). Uhambo ngaphambili luye lwavumela abantu ukuba bangene emgodini wecala, kepha izivakashi azivunyelwe esigodini ngenxa yezizathu zokuphepha.
Imali yendawo yi-Euro futhi izindawo eziningi zamukela amakhadi wesikweletu noma amadebhu, adinga i-chip ne-PIN. Kukhona ama-bureaus amaningi wokushintshana ezindaweni zokuvakasha eziphambili kodwa hhayi ezindaweni zaseSpain ezinjengeSanta Cruz.
Kunezikhumulo zezindiza ezimbili, iTenerife South (Reina Sofia) eduze kweLos Cristianos neTenerife North (Los Rodeos) nguLa Laguna. Kunamabhasi amaningana axhumanisa isikhumulo sezindiza emadolobheni amakhulu; amadolobha amancane, alindele ukuthi enze izinguquko zebhasi. Bayama phakathi kwamabili bese beqala futhi ukuzungeza i-5-6AM.
El Teide. Ukusuka epaki yezimoto, izivakashi zingathatha ukuphakamisa ikhebula le-10 ngomzuzu ukuya ku-3550 m. Ukukhuphukela engqungqutheleni (imvume engenhla ye-168 m) kubalulekile ngesicelo ku-National Park Office eSanta Cruz. Kusukela phezulu kukhona ukubuka okumangalisayo kuso sonke isiqhingi. ISEXWAYISO: E3718 m i-El Teide iyintaba ephakeme kunazo zonke ESpain. Ukukhuphuka okusheshayo ngemoto yekhebula kungaholela ekuguleni kokuphakama, ngisho nakwiziqongo eziqine kakhulu. Uma izimpawu ziqala ukubonisa kufanele wehle ngokushesha, Qaphela ukuthi ngezikhathi eziphakeme ukulinda imvelaphi yekhebula kungadlula ihora. Engqungqutheleni, imimoya enamandla ayijwayelekile neze okwehlisa izinga lokushisa. Kungakhathalekile amazinga okushisa emabhishi, uhambo oluya eTeide (noma ngisho nePaki Kazwelonke) lungabanda kakhulu, kube neqhwa esicongweni esiphakeme kuze kube ngoMashi / Ephreli ngokwesilinganiso. Ebusika lindela izinyawo ezimbalwa zeqhwa neqhwa, nomoya onamandla kanjalo ulungiselele ngokufanele.
IParque Rural de Anaga. Indawo enhle yokuhamba izintaba. Kukhona eminye imizila ongayenza. E-Cruz Del Carmen ungathola isikhungo sezivakashi lapho ungathola khona ulwazi mayelana nepaki. Ungakhohlwa ukuya kumbono wePico del Inglés lapho ungabona khona ubuhle besiqhingi (uma isimo sezulu sihle). Ukusuka eLa Laguna udinga kuphela imizuzu eyishumi nanhlanu emotweni ukufika. Ezinye izindawo iTaganana, Roque las Bodegas, Almáciga (emabhishi esihlabathi esimnyama).
Kukhona ezinye izinto zokushayela ezimangalisa kuzo zonke iziqhingi. Kunemigwaqo emide evunguza ezintabeni enezindawo eziphefumulayo kodwa zingaba inselelo kubashayeli abanamakhono amancane. Indawo edumile yindawo yaseMasca etholakala cishe ngehora le-1 drive enyakatho yeLos Gigantes (izindawo zokupaka zinqunyelwe kakhulu). Kulabo abangaqashi / bangabi nemoto ezindaweni zokungcebeleka eziningi kunezinkampani ezihlela uhambo lomqeqeshi lapho.
Enye yezinhlelo ezinkulu zomhume we-lava emhlabeni, ezitholakala kwi-Icod de los Vinos. Amabhulukwe amade namabhuthi amahle ayadingeka.
I-Teide Observatory, enye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni zokubuka isibhakabhaka inikeza ukuvakasha okuqondisiwe.
ISanta Cruz inamamyuziyamu ambalwa igalari yezobuciko, imnyuziyamu yesikhala neplanethi yomhlaba ngezinga elincane eliseduze naseLa Laguna.
NgoFebhuwari kunombukiso omkhulu wokugqokwa kwabantu bendawo okuthiwa ungowesithathu ngosayizi ngemuva kweRio ne-Notting Hill carnivals.
Vakashela amadolobhana amahle amadala eLa Orotava naseSan Cristóbal de La Laguna, okugcina kuyindawo eyi-UNESCO World Heritage Site.
Vakashela isivande sezwe se-botanical world ngenhla kwePuerto de la Cruz.
I-Tenerife indawo efiselekayo yabaphambukeli be-scuba, ngokusebenza okuningi kwe-dive kwazo zonke izimfanelo nezizwe. Amanzi azungeze lesi siqhingi ayakwazi ukuntywila unyaka wonke, futhi izinga lokushisa liyahlukahluka phakathi kwama-18 degrees ngoJanuwari kuya azungeze ama-25-26 degrees ngo-Agasti. Zungeza udonga lwetheku ePuerto de la Cruz ngokuhleleka kahle kwamatshe edwala, noma ukondla ama-stingrays eLas Galletas ngokuthile okwehlukile.
Imidlalo yezamanzi iyatholakala eningizimu kufaka phakathi i-surf, i-wind surfing, ukusheshisa kwesikebhe esisheshayo kanye ne-jet-ski. Akukho ndawo lapho kuqasha khona izikebhe.
Vele, izivakashi eziningi zifuna nje ukuchitha isikhathi sazo ebhishi noma echibini lokubhukuda lehhotela. Ibhishi laseMelika iPlaya sihlabathi esimnyama ngentaba-mlilo, kepha iLos Cristianos yisihlabathi siphuzi esivela ezweni. Isihlabathi esimnyama sizwa ngokufana nephuzi, kepha singashisa kakhulu lapho ilanga futhi kungathandeki ukubheka kwabaningi. Amabhishi avame ukuba nama-lounger elanga anamaphara atholakalayo ukuqasha lolo suku, kodwa uma ukwenza lokhu izinsuku ezimbalwa kungcono ukuthi umane uthenge i-parasol nezinye izikebhe zolwandle.
Ukudoba kweTenerife ngezinhlobo ezingaphezu kwezinhlobo ze-400 zezinhlanzi nangamarekhodi emhlabeni we-50, iTenerife inikezela ngokudoba okuhle kakhulu okuzungezile. Uyakwazi ukudoba unyaka wonke ubamba izinhlanzi ezinhlobonhlobo ezivela eBlue Marlin, Shark, Tuna, Wahoo, Amberjack nezinhlanzi eziningi ezisezansi ezibandakanya ama-giars amakhulu. Ukudotshwa kweMarlin kubhekwa njengenye yezindlela ezinkulu kakhulu ekudobeni kwezemidlalo. IBlue Marlin, ethathwa njenge 'King of Fish,' iyona ebaluleke kunazo zonke eMarlin futhi ifike iBlue Marlin ithathwa njengempumelelo ephezulu kakhulu yomdlalo wokudoba omkhulu wezinhlanzi. Ama-Angler avela nxazonke zomhlaba ahamba ayofuna lezi zidalwa ezinhle kakhulu ukuze azokwazi ukwengeza izimpaphe eziyigugu kakhulu kwikhampasi yazo. Esikhulu kunazo zonke ezake zabanjwa emanzini aseCanada asindwa ngaphezu kwengxenye yethani (537,5kg).
I-Tenerife indawo enhle yokuhamba izintaba. Kunemizila yanoma ngubani, kusuka ekuzuleni kwehora elilodwa kuya ekuzibhaceni okukhulu kwezinsuku ezigcwele ohambweni olude olufuna umhlaba onqenqemayo ngokukhuphuka okukhulu, imvelaphi noma zombili. Lezi yizindawo ezinhle kakhulu:
El Teide. Eceleni kwecwecwe, kungenzeka futhi ukuhawuka. Ukukhuphuka ngonyawo kuqala ngaphansi kwe- “Montaña Blanca”, endaweni ephakeme ye-2200 m (indawo yokupaka enomkhawulo). Ungakuthatheli phansi ukuhamba okufushane njengoba amazinga e-gradient futhi aphansi e-oxygen enza kube inselele ngisho nakwabahambi abanolwazi. Ngemuva kokuqala ngomusa kancane ithrekhi ye-4 × 4 ye-4 km, uqala ukukhuphuka okuwumbukwane futhi okumangazayo, ukhuphuka i-530 m endaweni engaphezulu kwe-1.5 km, lapho uzofika nge-Altavista Refuge eyakhiwe kabusha (3270 m). Lokhu kunikeza abakhwela umbhede wobusuku obukhulu kanye nezindawo zasekhishini. Ngemuva kokukhilomitha okuthe xaxa kanye nokwenyuka kwe-250 m, indlela ijoyina enye eholela ekubukeni kweLa Fortaleza, okulandela umgwaqo ozungeze i-El Teide ekukhuphukeni kukhebula. Uma kudingeka imvelaphi, hlola njalo ukuthi ngabe ukukhuphuka kwentambo kusebenza ngaphambi kokuqala, ngoba akuhambi esimweni sezulu esibi futhi kuvalwa ngaphandle kwesixwayiso. Kufanele uvumele amahora we-6-8 ukukhuphuka nozalo ngezinyawo.
Ukungena ngaphezulu kwentaba kudinga imvume (yamahhala) (ukubhuka kusenesikhathi, kuvame ukugcwala izinyanga ngaphambi kwalokho), ngaphandle kokuthi uvakashela ngaphandle kwamahora ajwayelekile (ngaphambi noma ngemuva kokuba i-cablecar isebenze). Futhi i-Altavista Refuge inesikhala esilinganiselwe futhi idinga ukubhukelwa.
I-Pico Viejo- ukuhamba ngokulingana okufuna ngenkani (amabhuzu entaba anconywayo) kungenzeka kwa-El Teide. Kuthatha cishe amahora we-5-6 ukusuka phezulu kuya phansi.
IMasca Cishe indlela ethandwa kakhulu (futhi ethize igcwele, uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zeTenerife). Kusukela esigodini saseMasca, ehla yonke indlela eya olwandle, phakathi kwamawa amakhulu. Hlola i- [Los_Gigantes] ukuthola imininingwane. Ukuthatha ukukhuphuka intaba kudinga okungenani izinsiza zamanzi, uma kwenzeka amazinga okushisa ephezulu.
Barranco del Infierno (Hell's Ravine), eduzane ne-Adeje ethandwa ngabadlali abahamba ngezinyawo, udinga ukubhuka ukuze uhambe ngezinyawo. Kunokuncane esingakubona kepha izimila kulolu hambo kanye nempophoma emincane ekugcineni kwayo.
Iphuzu elisentshonalanga kunazo zonke ukubukwa okuhle kakhulu kwePunta de Tenowith. NgeMigqibelo, ngamaSonto nangamaholidi asebhange, kodwa umgwaqo awuvulekele umphakathi phakathi kwe10 AM ne5 PM. Noma ungahleleli ukuhamba, ukulengiswa endlini yonke yokukhanyisa sekuvele kukufanele.
I-Roque del Conde, enye yezintaba ezigqame kakhulu ogwini oluseningizimu. Ukuhamba amahora ambalwa ukusuka e-Aronavillage eduzane kudlula emgodini omkhulu weBarranco del Rey futhi phezulu kunikeza ukubukwa okuhle kuzo zonke izinhlangothi (ngaphandle kokuthi kwakha iphutha).
Ama-Anagaprovides anhlobonhlobo lwezintaba. Ngenkathi ipaki ngokwayo incane, imigwaqo inamandla kakhulu - ukuphindaphinda ukuzulazula kwesikhathi kusikisela ngesici se2. Umgwaqo osuka eLa Laguna uya eChamorga uthatha indlela. I-1: 45 - amahora we-2. Ukuhamba ngezinyawo kungenzeka ezindaweni eziningi, noma kunjalo ezinye zazo zingadinga imvume yokungena. Uhlu olungaphelele kakhulu lwe-treks luyalandela:
I-Chamorga - Roque Bormejo. Uhambo lokuya nokubuya luqala edolobhaneni elihle laseChamorga, lidlula ezintabeni, ngasogwini (ukubukwa okuhle!), Indlu ekhanyayo i-Faro de Anaga, idolobhana laseRoque Bormejo bese iphindela esigodini iCamino de Roque Bormejo.
Ukuhamba okuphumuzayo (cishe umgwaqo ophethile) oya eCabezo del Tejovviewpoint, ngokusebenzisa ihlathi elinemikhuba (evame).
URoque de Taborno (“Matterhorn of Tenerife”) - uhamba amahora ambalwa ezungeza intaba enhle. Indlela inqamula eweni kwamamitha ambalwa, qaphela uma wesaba kalula ukuphakama.
I-Tenerife idonsela inani elikhulu labahamba ngamabhayisekili unyaka wonke. Noma ngabe ukuhamba ngezintaba, ukuhamba ngomgwaqo noma ukugibela ibhayisekili kagesi, iTenerife inemigwaqo eminingi emisha namathrekhi angcolile. Uma ufuna ukugwema inkinga yokuletha ibhayisekili lakho, ungaqasha amabhayisikili esiqhingini, ngokwesibonelo eLas America noma i-El Médano. Ukuhamba ngebhayisikile kunzima ukuzenza nje - imigwaqo yasogwini imatasatasa futhi kunendawo encane yamabhayisekili ngaphandle kokuvamisile ngaphakathi emathunjini. Noma kunjalo uma uthanda ukuhamba ngamabhayisekili ukhuphuka imigwaqo eminingi inemigwaqo efanele ukugibela lapho usuka ogwini lolwandle. Kulabo abangafanele kangako, inkampani eyodwa yokuvakasha inikezela uhambo lwemoto oluya esiqongweni se-El Teide ngomjikelezo phansi, akukho kudinga ukuhamba ngezinyawo.
Lesi siqhingi sisheshe sibe yindawo ebalulekile ebusika yokuwela izwe elenziwe ngesikebhe kanye ne-Enduro Mountain biking, njengoba ngokwesilinganiso ijabulela isibhakabhaka esishisa kanye namazinga okushisa afudumele lapho izindawo zokuphumula zezikebhe zaseYurophu zimbozwe odakeni naseqhweni. Ukuhlola lesi siqhingi ngebhayisikili lasezintabeni kuyinto evuzayo, ngenxa yokwehlukahluka okukhulu komhlaba, imifino nokuphakama. Ukuqhathaniswa okuncane nokuqhamuka emasimini e-lava namaphayini weCanary ogwini ngesikhathi sokuphuza ubhiya lapho ilanga selishonile. Amabhizinisi aholayo azokuthatha ngokuphepha ezindleleni ezihamba phambili zeTenerife.
ILoro Parque Zoois ngaphandle nje kwedolobha elisenyakatho nePuerto de la Cruz, okuyisisekelo sokuvikela izilwane kanye nepaki enkulu yezilwane.
I-Jungle Park eduzane nendawo yeLos Cristianos ikufanelekele ukuvakashelwa, inyoni yezinyamazane yangaphambi kokudoba kumele. Kukhona izixhumanisi zebhasi zamahhala epaki, kodwa ukuthola eyodwa ukubuyela emuva akumnandi kakhulu!
ISiam Parkwhich yipaki yamanzi eCosta Adeje eyakhiwe ngabanikazi beLoro Parque, amaza we-2 amamitha aphezulu wokufakelwa, amakhefu / imigoqo eminingana.
Uzothola nepaki lamanzi lomhlaba i-Aqua eCosta Adeje.
Karting Club Tenerife. Ama-Go-karts and motor bikes are racing in the track main and ezimbili osayizi inqola track kit. Akhiwe eduze kwePlaya de las Américas insiza yamabhasi yamahhala ukusuka nokubuya ehhotela lakho.
EPlaya de las Américas, kunezindawo eziningi zokuthenga, njengeSafari Center neSiam Mall, enezitolo eziningi zokugqoka nezindawo zokudlela.
ISanta Cruz inemakethe enkulu esiteshini ngeSonto ekuseni, nemakethe ethandekayo yendawo iMercado Municipal Nuestra Señora de África (evulwa nsuku zonke kuze kube yi14: 30). ILam America inolunye uLwesine nangoMgqibelo kanye neLos Cristianos ngamaSonto.
Kukhona izimakethe zamasonto onke eLas Américas neLos Cristianos, kanye neminye imizana emincane. Bathengisa izinhlobonhlobo zezikhumbuzo, kepha qaphela amaphakethe ngoba bathanda ukusebenzisa izindawo ezinabantu abaningi.
Emgwaqweni ophakeme eSanta Cruz, ungathola nemikhiqizo eminingi emikhulu, ngesinye isikhathi ngentengo ephansi kancane kunasemikhakheni yezivakashi.
Inhlanzi yingxenye enkulu yokudla kwendawo okudla okukuvumela ukuthi ukhethe inhlanzi ekukhetheni kwayo (okuvame ukubanjwa ngesandla) eziyokuphekela yona. Amazambane amnyama abizwa ngokuthi ama-papas arrocadas adluliswa ngaphandle kokudotshwa futhi ambozwe usawoti wedwala, alungele ukudonswa ku-sauce yendawo.
Njengakuwo wonke umhlaba waseSpain, ama-tapas adliwa kakhulu ngezinto ezikhethekile zasendaweni kubandakanya nososo lwegalikhi, ubhontshisi ocolisisiwe ne-squid. Ukudla okujwayelekile kwabantu baseSpain okufana ne- tortilla (amazambane omelet) ne-paella (indishi yelayisi enokudla kwasolwandle) nakho kuvamile.
Iseningizimu igcwele inala yokudlela yokudla okuyi-junk enama-hamburger, i-pizza, ama-chip, njll. I-15 McDonald's ifaka ezinye emabhishi. Futhi qaphela ukuthi ezindaweni ezithandwa izivakashi ezifana nePlaya de las Americaas, amamenyu ayatholakala ngezilimi eziningi ezisuselwa esiNgisini, isiJalimane, isiRussia kanye nezilimi ezithile zaseScandinavia, okwenza kube lula kakhulu ukukhetha noma ungajwayelene namagama ezitsha zasendaweni noma angiqondi iSpanishi.
Izindawo zokudlela eziningi zaseChinese ziyatholakala naseTenerife.
Ezindaweni zezivakashi, futhi kukhona nezindawo zokudlela eziningi ezimakethe.
Kodwa-ke, kulabo abafuna ukunambitheka kwesiko, futhi kunezindawo eziningi zokudlela zendabuko zaseCanada. Benza inyama enhlobonhlobo ephekwe ku-barbecue, kwesinye isikhathi benza izingxenye ezinkulu kakhulu.
I-Tenerife nayo inedumela 'lesehlakalo se-booze', iPlaya de las Americaas neLos Cristianos enikezela ngezindawo ezanele zalabo abajabulela i-24 ihora lokuklama nokuphuza. Iziphuzo ezitholakalayo ziyafana nezinye i-Europe (ikakhulukazi iBritish) ngamanani entengo ephansi kunalawo 'asekhaya asekhaya'.
Ubhiya wasendaweni wukunambitha okujwayelekile iDorada, etholakala yonke indawo. Iziphuzo ezikhethekile zifaka i-banana liqueur.
IBarraquito, ebizwa nangokuthi i-barraco, iyindlela ekhethekile yekhofi evela ku- eCanary Islands futhi ithandwa ikakhulukazi ngeTenerife kodwa nakuLa Palma.
URon Miel, ngesiNgisi yi-Honey Rum, yi-rum eyenziwe noju olukhonziswa kamnandi phezu kweqhwa. Kwezinye izingxenye ezengeziwe zesiqhingi zingasetshenziswa njenge 'thank you' ngokudla endaweni yokudlela.
Kunezinhlobonhlobo zewayini lendawo. I-Malmsey (Malavasías), amawayini abomvu, iwayini lezithelo.
I-Tenerife isiqhingi sentwasahlobo yaphakade futhi isimo sezulu sihle unyaka wonke. Ngokuvamile, isimo sezulu sishona eningizimu futhi kunamafu enyakatho.